Baahin baahsan ayaa la cusbooneysiiyay oo hadda waxay taageertaa qaabka madow | Wararka IPhone
Codsiga ayaa la cusbooneysiiyay dhowr saacadood ka hor oo hadda dhammaan dadka isticmaala iOS 13 habka mugdiga ah ayaa yimid. Dhab ahaantii tani waa mid ka mid ah horumaradaas ay filayaan dadka isticmaala badan Duufaan, codsi si aad u ciyaarto podcasts. Hadda oo ay weheliyaan xoogaa horumar ah oo ku saabsan nidaamka iyo qaar ka mid ah cilladaha cilladaha leh waxaan ka helnay wax cusub.
Waxaan ku jirnaa nooca 2019.10 ee ku habboon sanadka iyo bisha aan ku jirno, xaqiiqda xiisaha leh. Dhinaca kale, wax intaa ka badan ma jiraan, imaatinka qaab mugdi ah oo codsi ah oo adeegsadeyaal badani u isticmaalaan inay ku ciyaaraan podcasts-ka aan jecel nahay.
Ku saabsan hirgelinta qaabkan mugdiga ah ee ku jira arjiga, waxaan dhihi karnaa wax kale oo yar oo aadan ku arkin qabashada oo si aad ah ayaa loo dhaqan galiyay. Sidoo kale goobaha aan ka kala dooran karno mawduucyada kala duwan: Iftiin, Mugdi, Madoow iyo ka dib qaababka mugdiga ah ee Madowga iyo Madowga, labadan dambe, mid baa wadar madow ah, ka kalena waa ka sii cirro badan yahay. Waa shuruud lagama maarmaan u ah inaad ku jirto macruufka 13 ama ka sareeya si aad u awood u yeelatid inaad ku rakibtid qaabkan mugdiga ah ee 'Overcast'.
Oo tan iyo markii aan ka hadlayno podcast xusuusnow inaad si toos ah ula socon karto kuweenna si toos ah habeennada Talaadada kanaalkayaga YouTube ama wax yar sug ilaa inta codka podcast-ka la helayo iyada oo loo marayo iTunes iyo macmiilkaaga Podcast-ka ah sida Ovecast sidii caadiga ahayd. Iyo kuwa doonaya inay wax ka sheegaan wax ka socda shabakadaha bulshada, waxay sidoo kale ku sameyn karaan si toos ah iyagoo isticmaalaya hashtag #podcastapple on Twitter ama ka kanaalkayaga Telegram. Xusuuso taas Duufaanta guud ahaanba waa bilaash (inkasta oo aad wax ku darsan karto) waadna kala soo bixi kartaa xiriirka hoose.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Duufaanta ayaa hadda taageerta habka mugdiga ah